Fiainana miloko: inona izy ireo, firy no misy azy ary ahoana ny fomba hanaovana azy | Famoronana an-tserasera
Ny fiaviana miloko dia tsy zavatra noforonina ankehitriny. Efa hatry ny ela izy ireo. Na izany aza, ireo dia nidina an-tsokosoko nandritra ny fotoana fohy tamin'ny sary an-tsary, satria nanjaka ny sary, ny endrika, sns. fa tsy mampiasa background misy loko (na misy loko miloko). Miverina amin'ny lamaody indray izy ireo ary noho izany antony izany, raha mpamorona ianao na te hamorona fotsiny dia fotoana tokony hahalalanao miloko miloko kokoa.
Fa inona avy ireo? Ahoana no anaovana azy ireo? Inona avy ireo karazana?
1 Inona avy ireo fiaviana miloko
2 Karazana fiaviana miloko
3 Ahoana ny fomba hanaovana background misy loko
3.1 Loko gradien ambadika
Inona avy ireo fiaviana miloko
ny Ny fiaviany miloko dia fotony, raha lazaina, vita amin'ny loko maro karazana. Izy io dia mety ho tokana, izany hoe, loko tokana toy ny maitso, manga, mena ... na koa tononkira na firavaka gradient izay mifangaro sy mitambatra ny loko samy hafa mamorona endrika tsy manam-paharoa.
Indraindray izay atao dia ny mamoaka loko na loko miloko amin'ny voankazo, avy any an-danitra, avy amin'ny voninkazo, avy amin'ny filentehan'ny masoandro amin'ny fomba iray, avy amin'ny sary, ny ampahany aminy dia nalaina izay, avy eo, dia mamorona loko ambadika .
Afaka mahita karazany maro amin'ny Internet ianao, fa ny tena marina dia afaka mamorona ny valiny afara miloko ianao miaraka amina programa fanovana sary.
Karazana fiaviana miloko
Ny fanaovana lisitr'ireo karazan-doko miloko dia saika tsy ho vita mihitsy, indrindra satria maro be ny anarana. Matetika, ny fanasokajiana dia atao amin'ny loko na endrika. Ohatra, raha mifototra amin'ny loko izany dia mety hanana fiafiana miloko mafana, tsy miandany ary mangatsiaka ianao; na loko matevina sy pastel. Azonao atao ihany koa ny mahita ambadika gradient, manjavozavo na milamina.
Ary ny lamaody sasany tena lamaody ankehitriny dia ny fiava-loko Aesthetic.
Fomba taloha, fiaviana futuristic ... Raha ny marina misy tontolo iray ao anatin'ity karazana ity izay misy ny tena loko manjaka, tsy misy tarehimarika, tsy misy sary, fa ny loko miloko ihany (iray na maromaro).
Ahoana ny fomba hanaovana background misy loko
Raha aleonao ny ho original sy mamorona kokoa amin'ny volavolanao sy ny tetikasanao ary te-hamorona loko miloko ianao avy eo am-boalohany, dia holazainay aminao hoe inona avy ireo dingana tokony hataonao. Ho an'ity dia mampiasa Photoshop izahay, satria izy io dia iray amin'ireo programa ampiasain'ny matihanina sy mpamorona endrika. Saingy amin'ny ankapobeny, amin'ny programa fanovana sary rehetra dia hanana dingana mitovy (na mitovy) ianao hahazoana ny vokatra tadiavinao.
Amin'ity tranga ity, ny dingana tokony horaisina dia:
Sokafy ny programa Photoshop. Mila mangataka amiko ianao hamorona antontan-taratasy vaovao ho anao. Amin'ity tranga ity, miankina aminao ny fandrefesana fa, raha tsy manana voafaritra ianao dia tsara kokoa ny misafidy ny habe 1920 x 1080 teboka. Ataovy mainty ny sosona afara fa tsy fotsy.
Rehefa manana ny sary ianao dia mila mamorona sosona vaovao. Mba hanaovana izany, Layers / New layer. Antsoy hoe "mavo" ilay iray ary manomboka mandoko kely eo amboniny ilay fitaovana borosy. Saingy tsy mila mameno azy rehetra ianao, ampahany fotsiny amin'io sosona io.
Mamorona sosona vaovao hafa ary omeo anarana hoe manga. Fantatrao ve izay hataonao? Miaraka amin'ny fitaovana borosy, sy ny loko manga, mandoko sombin-javatra hafa, izay tsy afeniny ny mavo, na farafaharatsiny tsy feno.
Aza mitsahatra mamorona sosona misy loko sy loko isan-karazany mandra-pahatapitry ny famolavolana.
Vantany vao vita ianao dia tsy maintsy atambatra ireo sosona rehetra. Mba hanaovana izany: Layer / Smart Objects / Hanova ho Smart Objects.
Avy eo mandehana any amin'ny Edit / Transform / Warp. Io dia hahafahanao manova ny endrika kely, na manalava, manafoana na mihetsika araka ny itiavanao azy.
Rehefa afa-po ianao dia mandehana any amin'ny Window / Settings / Levels. Ampitomboy ny fifanoherana amin'ny fananganana mainty sy fotsy ary zahao ny safidy fa izay novainao dia mihatra amin'ny ambin'ny sosona ihany koa.
Farany, avereno ny sosona ary, amin'ny fomba fampifangaroana, apetraho amin'ny Overlay. Mba hahitana vokatra tsara kokoa dia azonao atao ny mihevitra ny fanovana ny sosona ambadika ho manga manga. Ary vonona!
Mazava ho azy fa fomba iray ihany io. Misy fomba maro tokoa hanaovana fiavana miloko, ary tsara kokoa ny manandrana. Na izany aza, andao isika handeha gradient izao.
Loko gradien ambadika
El Ny haitao miloko mavitrika dia teknika iray hafa hamoronana background. Mba hanaovana izany, loko roa matetika no ampiasaina amin'ny paleta (loko voalohany sy faharoa) ary ampiharina miaraka amin'ny fitaovana gradient, amin'ny làlana irina.
Ireto ny dingana:
Manokatra antontan-taratasy misy ny refy tadiavinao. Raha tsy tianao, mandehana mitady pixel lehibe 1920 x 1080. Miaraka amin'ny fotsy fotsy.
Ankehitriny, ao amin'ny menio fitaovana, tadiavo ny vilany fandokoana. Na izany aza, raha manindry kely ianao dia ho hitanao fa manome anao safidy faharoa izy io, voahosotra. Tsindrio eo.
Manaraka izany, tsy maintsy mandeha any amin'ny paleta miloko izay namboarinao ny loko mialoha sy ny fiaviany. Ovao tsirairay ny lokony tadiavinao.
Ary farany, mila tsindrio fotsiny ny teboka iray ao amin'ilay antontan-taratasy ianao ary hifindra amin'ny teboka iray hafa (matetika hatrany ambony ka hatrany ambany, hatrany ambany ka hatrany ambony, na amin'ny sisiny). Hisy tsipika noforonina izay mandeha amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa ary, rehefa mamoaka ny bokotra totozy ianao dia hahita izany, ho azy dia hiteraka ny gradient.
Mazava ho azy, azonao atao koa ny manandrana ary izany, miaraka amin'ny gradient, ianao dia mahazo menio kely ao amin'ny tapany ambony amin'ny Photoshop izay ahafahanao misafidy gradients samy hafa ary koa ny gradient style, ny fomba fampifangaroana an'io, ny opacity ary koa hafa .. antsipiriany izay afaka manova ny valiny manontolo.
Ahoana raha te-hanana loko tokana aho?
Tena mora ny mahita ny fiaviany miloko amin'ny loko tokana. Saingy mety ho ny tonony tadiavinao dia tsy, noho izany, hamoronana azy, tsy misy mora toa ny:
Manokatra rakitra ao amin'ny Photoshop (miaraka amin'ireo refy tadiavinao). Avelao ho banga ny background.
Mandehana any amin'ny faritra fitaovana ary manondro ny vilany fandokoana. Ao amin'ny loko eo aloha dia safidio ny loko tadiavinao ary kitiho ny totozy amin'ny teboka iray amin'ilay rakitra banga.
Hivily ho azy amin'ilay loko nomarihinao izy io. Noho izany dia hanananao ny fiafaran'ny loko tadiavinao.
Anjaranao izao, te-hamorona loko miloko tsara ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Fiainana miloko
Ny typefaces tsara indrindra hamoronana logo